Slabs House Imba Yekugara - Dhizaini magazini
Imba Yekugara Imba yeSlab yaive yakagadzirirwa juxtapose zvekuvakisa, kusanganisa huni, kongiri, uye simbi. Dhizaini iri kamwechete hyper-yazvino asi yakangwara. Iwo mahwindo mahombe anotaridzika kutarisa nzvimbo, asi anochengetedzwa kubva kumamiriro ekunze uye mumugwagwa-maonero nekongiri slabs. Minda inoratidzira yakakura kwazvo muchivako, ese ari pasi pevhu uye nepasi pekutanga, achibvumira vagari kuti vanzwe kushamwaridzana neyechisikwa pavanopindirana nepfuma, vachigadzira inoyerera imwechete sezvo imwe inofamba kubva pamusuwo kuenda kunzvimbo dzekugara.
Zita rechirongwa : Slabs House, Vagadziri zita : Ghiath Al Masri, Izita remutengi : Ghiath Al Masri.
Imba Yekugara Ghiath Al Masri Slabs House